Muuri News Network » XOG: Qaraxii Ismiidaaminta ee Hoteel Uunlaaye oo Dad loo dilay & Sawirada meydad la arkay.
XOG: Qaraxii Ismiidaaminta ee Hoteel Uunlaaye oo Dad loo dilay & Sawirada meydad la arkay.
Ciidanka Puntland ayaa la sheegay in ay ka dambeeyeen dilal argagax leh oo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaana meydadka dadka la dilay oo kasoo kala jeeda itoobiya iyo Soomaalida koonfurta laga helay wadooyinka magaaladaasi iyagoo si xun loo dilay.
Iyadoo arinta sidaasi ay tahay ayuu sheegay maamulaha Hotelka Uunlaaye in loo soo sheegay maalmo kadib meydka labada ruux ee Hotelka lagala baxay oo la geeyay Isbitaalka Magaalada Gaalkacyo, kadib markii meydkooda laga soo qaaday deegaanka Gobsho halkaasi oo lagu dilay.
Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Mudug ee Puntland oo arintaan ka hadlay ayaa sheegay inaysan garan karin sababta iyo cida dishay ragaasi.
HOOS KA DAAWO SAWIRRO NAXDIN LEH